Awoodda jaangooyooyinka - Gofumed
Sebtember, 2014 dhowr
Dhowr maalmood ka hor waxaan la hadlaya mid ka mid ah mentorsadayda ku saabsan sida ay muhiim u tahay in la qabsado fikradaha ugu muhiimsan ee ku saabsan qorshaha garaafka. Haddii ay tahay khariidad maskaxeed, qorshe uml, shax diirran ama qoraallo fudud oo ku saabsan maqaarka makhaayadda, fanka farshaxanka fikradaha wuxuu ku dhamaanayaa in ka badan madadaalo.
Baadhitaanku waxa uu qaatay wax la yaab leh waqtigaan, raadinta si uu u muujiyo nidaam fikradeed, fikrad aan la taaban karin ah oo la adeegsanayo garaafyada la isku habeeyey, isku-kalsoonaanta ama dhaqdhaqaaqa; taas oo ka faa'iideysan karta qoraalka caadiga ah-keliya, ama boqollaal bog oo fikrad adag ku sharraxan shan daqiiqo. Sidaa awgeed, aragtiyayaashu waxay leeyihiin caado ka hadlaysa sida sawirada, iyaga oo rumaysan in qof kastaa fahmo; laakiin tag in 13 ay macquul tahay sanado ka dib.
Tusaalayaasha Nasiibka Nasiib darradu waxay ku saabsan tahay maalin kasta, mawduucyo fara badan iyo mawduucyo badan oo su'aal ah sida aad fahamsan tahay in habka kaliya ee lagu abuuri karo nasiib la yahay edbin.
Taas oo ah sheyga ka mid ah dalladaha aan la socon dareenka caadiga ah, ma ihi xaddidan inaan ku siiyo mudnaanta sida loo dhiso:
Laga bilaabo laga soo bilaabo nasiibyada nasiib u leh, waxay ku takhasuseysaa shanta sheymood ee ugu muhiimsan dunida:
Qodobka afar-caleen ah
Cagta cagta ah
Dabadeedna waxa lagu dhejiyaa caadooyinka caanka ah:
Budhcad-badeedda ee Shiinaha
Dhuxulada dhagaxa ah ee dhaqamada kale ee leh dhaxalka dhaqdhaqaaqa madadaalada ah
Kabaha hore ee wakhtiyada dhexe
iyo dheriga ku yaal Feng Shui
Waxaan ka helaa hal-abuurnimo in ay noqoto mid xiiso leh, inkasta oo aad u qumman oo la saadaalin karo marka laga hadlayo mawduuca falsafada noocan oo kale ah. In aan si buuxda ugu heshiin doono infogshanka (marka la eego content), waxa weeye waxa macnaha guud nasiib wanaagsan, kuwa kale waxay noqon doonaan qaali. Guud ahaan, naqshadeynta, waxaan jecelahay, taasina waxay igu wareejisaa inaan dib u eego.
Qaybteyda, si aan u qoro nasiibkeyga maalin kasta waxyaabihii ay mudanayeen mudada dheer. Wixii kuwa jecel mawduucan oo leh dhiirigelin dheeraad ah, waxaa jira Nuclearka nasiibku leeyahay.
Post Previous«Previous Koorasyada cusub ee gvSIG online
Post Next data bandhigay QGIS ee Google EarthNext »